Otu esi ede aha na AliExpress
Kwa ụbọchị, eziokwu ahụ na-esiwanye ike, na-eguzobe ọbụna ndị iro kachasị ike nke ịzụta ịntanetị iji nweta ụlọ ahịa n'ịntanetị. Nnukwu nhọrọ, ọnụ ahịa ọnụahịa, ikike ịchọta ihe ndị analogues anaghị achọpụta na ire ere na mba nke onye zụrụ ya. AliExpress na nke a enweghị ihe ọ bụla asọmpi, ịbụ nnukwu ụlọ ahịa ahịa nke mba ụwa.
Ịnata nhazi site na AlIExpress
N'oge ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ AliExpress na-akwụ ụgwọ ọdụ ọdụm ahụ na-echere ngwugwu, na-eche na ọ bụrụ na ọ bịara, mgbe ahụ, ihe nile dị n'usoro. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị. Onye ọ bụla na-azụ ụlọ ahịa dị na weebụ (onye ọ bụla, ọ bụghị naanị AliExpress) aghaghị ịmata n'ụzọ zuru ezu usoro maka inweta ihe site na mail iji nwee ike ịjụ ya n'oge ọ bụla ma weghachite ya na onye na-ezipụ ya.
Otu esi achọta nọmba ọnụọgụgụ nke AliExpress
Mgbe ị debere iwu na AliExpress, ọ na-anọgide na-echere ịzụta ihe a na-echere ogologo oge. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka a nyochaa usoro a. N'ụzọ dị mma, a pụrụ ime nke a site na iji ọrụ nyochaa pụrụ iche. A na-enye ozi a site na ọrụ AliExpress n'onwe ya na site na ndị ọzọ. Mana nke a, ha niile chọrọ koodu egwu.
Kaadị bank gbanwere na AliExpress
Kedu akụ bank dị nnọọ mma ịkwụ ụgwọ n'ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, gụnyere AliExpress. Otú ọ dị, mmadụ ekwesịghị ichefu na kaadị ndị a nwere ụbọchị nke njedebe ha, mgbe nke a gasịrị, a ga-eji ihe ọhụrụ a kwụọ ụgwọ. Ee, ọ bụghị ihe ijuanya na ị ga-atụfu ma ọ bụ mebie kaadị gị. Na ọnọdụ a, ọ dị mkpa ịgbanwe nọmba kaadị na akụ ahụ ka akwụ ụgwọ site na isi iyi.
Enweghị m ike ịga na AliExpress: isi ihe na ngwọta
N'ezie, AliExpress, ọ dị mwute, ọ bụghị nanị iji mee ihe dị mma, kamakwa iwe iwe. Ma ọ bụghị naanị maka iwu ntụpọ, esemokwu na ndị na-ere ahịa na ego efu. Otu n'ime nsogbu ndị nwere ike ịme iji ọrụ ahụ bụ ihe na-enweghị ike ịbanye na ya. N'ụzọ dị mma, nsogbu ọ bụla nwere ngwọta ya.
Chọọnụ ngwaahịa site na foto na AliExpress
Ọtụtụ mgbe, ọ na-apụta na n'ịchọta ngwá ahịa na Ali n'ụzọ dị irè, ngwa nyocha ọkọlọtọ ezughị. Ndị na-azụ ahịa ọkachamara na ọrụ a mara otú otu foto nwere ike isi nyere aka. Mana ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịghọta nke a. N'ozuzu, enwere ụzọ abụọ isi chọta ngwaahịa na AliExpress site na mbiet ma ọ bụ foto.
Ihichapụ profaịlụ na AliExpress
Onye ọ bụla onye ọrụ AliExpress nwere ike iji oge ọ bụla kwụsị iji akaụntụ ndekọ ya maka ihe dị iche. Maka nke a, enwere ọrụ arụ ọrụ proactivation pụrụ iche. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ na-ewu ewu, ọ bụghị ha niile na - achọpụta ebe ọrụ a dị. Ịdọ aka ná ntị Nsonaazụ nke proactivation profaịlụ na AliExpress: Onye ọrụ ahụ agaghị enwe ike iji ọrụ nke onye na-azụ ma ọ bụ onye zụrụ site na iji akaụntụ dị n'ime.
Ịmeghe esemokwu banyere AliExpress
O di nwute, ọ bụghị n'ọnọdụ nile iwu na ọrụ AliExpress nwere ike ịnwe mmasị ịzụta. Nsogbu nwere ike ịdị nnọọ iche - a gaghị enweta ihe ndị ahụ, a naghị enyocha ya, wee bịa n'ụdị na-ekwesịghị ekwesị, na ihe ndị ọzọ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ị ​​gaghị adabere imi gị ma kwaa ákwá maka ọdachi. Nanị ụzọ ị ga-esi pụta bụ imeghe esemokwu.
Nchekwa na AlIExpress
Ịhazi site na AliExpress dị mfe, ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma. Ma, ebe a, iji zere nghọtahie, a na-eme usoro ịhazi ihe dị iche iche iji nwee ike ijikwa akụkụ ọ bụla nke azụmahịa ahụ. A ghaghị ịtụle ha ka nke na-emecha ghara inwe nsogbu. Ngwongwo ndokwa n'elu AliExpress On Ali, enwere ihe ndi kwesiri ekwesiri iji chebe ndi otu abuo iji kpochapu okwesiri.
Niile Ịkwụ Ụgwọ Nhọrọ na AliExpress
Ọtụtụ ndị ọrụ nke ịntanetị na-echefu oge karịa ịhọrọ ngwaahịa karịa ịme nzụta. Ma mgbe mgbe, ị ga-eji tinker na ịkwụ ụgwọ. AliExpress na nke a na-enye ohere sara mbara nhọrọ nke ịkwụ ụgwọ ka ndị ahịa wee nwee ike ịzụta n'ụzọ ọ bụla n'ụzọ ọ bụla.
Ntughachite okwughachite na AliExpress
Ọ na-emekarị na mmadụ nwere ike ichefu ọbụna ihe kachasị mkpa, ka naanị ụfọdụ ọnụ ọgụgụ, akwụkwọ ozi na akara. Ọ dabara na, ọbụna AliExpress nwere usoro nchịkwa nke onwe ya maka ndị jisiri ike ichefu ma ọ bụ tụfuo ya. Usoro a na-enye gị ohere ịnweta akaụntụ gị n'ụzọ dị irè n'ọtụtụ ọnọdụ nke ọnwụ.
Na-ejuputa ozi nnyefe na AlIExpress
A zụtara ngwaahịa AliExpress zuru ụwa ọnụ. Nnyefe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị ga-abanye n'ụlọ ọrụ kachasị dị nso ma ọ bụ site na onye na-eziga onwe gị na ebe kwesịrị ekwesị - nke a dabere na nkwekọrịta na onye ahịa. Ya mere, ọ dị oké mkpa ka ị dejupụta data ederede n'ụzọ ziri ezi ka ngwugwu achọrọ agaghị aga ebe ọzọ.
Anyị na-egwu usoro na AliExpress
Mgbe ịzụtara ngwongwo na Ali, usoro nke kachasị sie ike na nke kachasị njọ - oge echere maka nnyefe. Usoro ya nwere ike ịdị iche na-adabere na anya nke mbupu. Iji jide n'aka na ichere ahụ bụ eziokwu, enwere ohere iji nyochaa njem nke ngwaahịa a chọrọ. Ndepụta nke ngwongwo Ọtụtụ ndị na-ere ákwà na-eji ọrụ nke ndị ọrụ nnyefe mba.
https://termotools.com ig.termotools.com © Aliexpress 2020